Wararkii ugu dambeeyey Mooshinka ka dhan ah Gudoomiye Muudeey – Puntlandtimes
Wararkii ugu dambeeyey Mooshinka ka dhan ah Gudoomiye Muudeey
MUQDISHO(P-TIMES) – Loolankii ugu adkaa ayaa ka bilowday Muqdisho, Gudoomiye kuxigeenka 1aad ee baarlamaanka Soomaaliya ayay doonaysaa Madaxtooyadu in laga saaro guddoonka baarlamaanka, oo uu maro wadadii uu maray Saaxiibkiisii uu ku caasiyey Prof, Maxamed Sh Cismaan Jawaari.
Mr, Muudeey hadda wuxuu wajahayaa cadaadiskii ugu xooga badnaa oo uga imaanaya dhinaca Madaxtooyada, waxaana la doonayaa in todobaad soo socda ay baarlamaanka Faderaalka la horkeeno mooshinka ka dhan ah, waxaana uu waayay markaas in uu shir gudoomiye golaha, haddii uu maqan yahay guddoomiyuhu.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay inuu maalmahanba jiray guuxa mooshinka, hase ahaatee aan si rasmi ah loo ogeyn heerka uu gaarsiisan yahay, marka loo eego abaabulkiisa oo aan hada u muuqan mid xowli ku socda, balse laga yaabo marka uu Baarlamaanka ka soo laabto fasaxa Ciida inuu soo shaac baxo.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in Guddoomiye C/weli Muudey uu aad uga soo horjeedo Sharciga Doorashooyinka oo hada horyaala Baarlamaanka, kaasoo qorshaha Madaxtooyada iyo Xukuumadda wadato uu yahay in doorashada Madaxweynaha ay noqoto mid ay doortaan dadweynaha, halkii ay horay Xildhibaanada u dooran jireen.
Xildhibaano ku dhow Madaxtooyada ayaa la sheegay inay hormuud u yihiin Mooshinka la doonayo in laga keeno Guddoomiye Muudey oo loo arko inuu caqabad ku yahay sharciga doorashooyinka, ayna jireen kala aragti duwanaan isaga iyo Madaxweynaha oo ku saabsanaa sharciga doorashooyinka ee bishii hore ay soo ansixiyeen Golaha Wasiirada.
Guddoomiye C/weli Muudey ayaa xilligan ku maqan dalka Turkiga, iyadoo la rumeysan yahay inuu xilligan awood ku leeyahay Baarlamaanka, waxaana la xusuustaa doorkii uu ku lahaa ridistii Guddoomiye Jawaari.
Lama oga sida uu ku suura geli doono ololahan ka dhanka ah Guddoomiye Muudey, iyadoo mooshin laga keeno ay u baahnaan doonto saddex meel hal meel oo ah 91 Xildhibaan tirada uu ku gudbi karo Mooshinkan.